लिम्बू संसार: नम्रताको सेक्स भिडियोमा के - के छ ?
नम्रताको सेक्स भिडियोमा के - के छ ?
६-७ वर्षअगाडि न्युरोडमा मोबाइल लुटेको अभियोग लागेर प्रहरी हिरासतमा थुनिएको एउटा केटो ६-७ वर्षपछि एउटी उदीयमान कलाकारको नग्न भिडियो सार्वजनिक गरेर कसैकी छोरीâ€“चेलीको जीवन हरण गर्ने तहसम्म उत्रिएको छ। प्रसंग, उही उदीयमान चलचित्र नायिका नम्रता श्रेष्ठ र डिजे तान्त्रिकको बहुचर्चित सेक्स भिडियोको हो। मध्यकाठमाडौंको भीमसेनस्थान मूलघर भई आजकल कलंकीपारिको गाउँ स्युचाटार बस्ने गरेका किचःमान चित्रकार नै हुन्, जो डिजे तान्त्रिकको नामले चिनिन्छन्। र, तिनी उनै व्यक्ति हुन्, जसले सामूहिक रूपमा न्युरोडस्थित एक मारवाडीको मोबाइल पसल लुटेका थिए। यद्यपि, उनको अपराधको कथा त्योभन्दा अगाडिबाटै सुरु भएको हुन सक्छ, तर प्रहरीमा दर्ज भएको यो पहिलो अभियोगसँगै अहिले उनी सेक्स भिडियोको मामिलामा जघन्य प्रकृतिको अभियोग बोकिरहेका छन्। नेपालभाषामा 'किचः' को अर्थ 'छाया' हुन्छ। परम्परागत चित्रकारितामा दखल राख्ने परिवारका हुन्, उनी। उनले झन्डै चार वर्षअगाडि परम्परागत शैलीमा विवाह र भोज गरेका थिए। मध्यमवर्गीय परिवारका उनले नायिका नम्रतालाई विभिन्न प्रलोभन दिएर उक्त भिडियो खिच्न सफल भएको मनोविश्लेषकहरूले ठहर गरेका छन्। समाजमा चरम विकृति पैदा गर्ने भिडियोको सर्जकका रूपमा अहिले किचःमान प्रहरीको वान्टेड सूचीमा परिसकेका छन्। भिडियो सार्वजनिक भएयता उनी साथी र परिवारकै सम्पर्कमा छैनन्। उता, धरानस्थित छाताचोक र जनपथआसपासकी स्थायी बासिन्दा नम्रता भने सेक्स भिडियो सार्वजनिक भएयता विक्षिप्त छन्।
सुरुका दिनमा पत्रकार सम्मेलन वा प्रेसविज्ञप्तिमार्फत आफ्ना भनाइ राख्ने बताएकी उनी तीन दिनयता काठमाडौंस्थित डेरामा बन्दीप्रायः अवस्थामा रहेकी छन्। उनको सेक्स भिडियो सार्वजनिक भएलगत्तै धरानबाट उनकी आमा काठमाडौं आएकी थिइन्। 'अब बाँच्ने मन छैन' भन्दै निरन्तर बिलौना गरेका कारण अहिले उनको निगरानीका लागि दुईजनालाई चौबीसै घन्टा राखिएको जानकारी आमाले दिएकी छन्। यसबीच नम्रतासित धरानवासी सञ्चारकर्मी सुरज श्रेष्ठ (इमेज टेलिभिजन) ले सम्पर्क गर्दा नम्रताकी आमाले फोन उठाइन् र नम्रता बोल्ने अवस्थामा नभएको बताइन्। सुरजले जनआस्थासित भने, 'यतिवेला उनको जीवनरक्षाको सवाल आएको छ।' नम्रताकी आमाका अनुसार आइतबार एउटा दैनिक पत्रिकाले मुखपृष्ठमा सेक्स भिडियोबारे समाचार छापेयता उनी विक्षिप्त भएकी हुन्। म्युजिक भिडियोहरूमा पनि अभिनय गर्ने नम्रताले किचःमानको कुनै म्युजिक भिडियोमा भने काम गरेकी छैनन्। किचःमानले सन् २००७ मा 'स्कन्द' शीर्षकको क्यासेट निकालेका थिए भने सन् २००८ मा 'कालचक्र' क्यासेटमार्फत शास्त्रीय र आधुनिक संगीतको कुशलतापूर्वक प्रयोग (फ्युजन) गरेका छन्। हालसालै रियाज म्युजिक कम्पनीबाट उनले 'रिवाइन्डâ€“ २' नामक क्यासेट पनि निकालेका छन्। भिडियो सार्वजनिक प्रकरण बजारमा सेक्स भिडियोबारे चर्चा हुनुअघि नै नम्रताले अभिनय गरेको चलचित्र 'मेरो एउटा साथी छ' मा सानो भूमिका निर्वाह गरेकी कलाकार सुषमा कार्कीले नायिका रेखा थापासहितका केही चलचित्रकर्मीलाई उक्त सेक्स भिडियो देखाएकी थिइन्। सुषमा सोही चलचित्रका निर्देशक सुदर्शन थापाकी केटी साथी र प्रोडक्सन कन्ट्रोलरकी भान्जी पनि हुन्। उनीसितै रहेको सेक्स भिडियोका आधारमा किचःमानकी पत्नीले माइती नेपालमा पतिविरुद्ध उजुरी गरेकी थिइन्। तर, महिलाहरूको जीवनसँग सम्बन्धित र संवेदनशील विषय भन्दै माइती नेपालले उक्त उजुरी गोप्य राखेको छ। गुमाउँदै नम्रता वर्षौंको संघर्षबाट नम्रताले बनाएको करिअर सेक्स भिडियोले समाप्त पारिदिएको छ। भिडियोकै कारण उनले हात पारेका अवसर र बनाएका सम्बन्धहरू क्रमशः गुमाउन थालेकी छन्। लामो समयदेखि नम्रताको प्रेमसम्बन्ध कलाकार मदनदास श्रेष्ठका छोरा, सञ्चारकर्मी तथा मोडल रेमन श्रेष्ठसित थियो। कान्तिपुर एफएममा कार्यक्रम चलाउने र बचेको समय एक रेस्टुरेन्टको व्यवसायमा लगाउने रेमनâ€“नम्रता सम्बन्ध पनि यो प्रकरणबाट संकटमा परेको छ। यद्यपि रेमनले आफ्ना साथीभाइसँग कुरा गर्दै नम्रतालाई गल्तीका निम्ति माफी दिने र उनलाई नै अँगाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अभिनय र मोडलिङसँगै कान्तिपुर एफएममा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकी नम्रतालाई केही महिनाको निम्ति काममा नआउन भनिएको छ। स्पि्रङ उडको ब्रान्ड एम्बेस्डरका रूपमा उनी काम गर्थिन्। तर, भिडियो सार्वजनिक भएयता उक्त उत्पादनका विज्ञापनबाट उनको तस्बिर हटाइएको छ भने उनको ब्रान्ड एम्बेस्डरको उपाधि समाप्त भएको छ। उनले सिमोस सुनुवारले निर्देशन गर्ने तयारी गरेको चलचित्र 'फर्स्ट लभ' मा ५० हजार रुपैयाँ पेस्की बुझेर अनुबन्धन करारनामा गरेकी थिइन्, तर उक्त चलचित्रमा उनलाई अभिनय नगराउने निर्णय निर्माणकर्मीले लिइसकेका छन्। नम्रताको सेक्स भिडियोमा केâ€“के छ? सेक्स भिडियोका दुई भाग छन्। पहिलो भाग १३ मिनेट २३ सेकेन्डको छ भने दोस्रो भाग १३ मिनेट ५३ सेकेन्डको। भिडियोमा उनीहरू सहज रूपले अंग्रेजीमा कुरा गरिरहेको देखिन्छ। पहिलो भागको अघिल्ला दृश्यमा नम्रताले नेपालीमा किचःमानलाई भनेकी छन्, 'तिम्ले नै भनेको होइन र, तीन/चार दिनभित्र पिल्स (गर्भनिरोधक) लिनुपर्छ भनेर? किन नसम्झाएको?' यो संवादले भन्छ, उनीहरूबीच त्यो पहिलो यौनसम्पर्क थिएन र मित्रता पनि नयाँ थिएन। दृश्य खिचिएको स्थान सहर वा व्यस्त टोल भन्ने कुरा बाहिर गाडीको हर्न बजेबाट बुझिन्छ भने कसैको घरमा त्यो दृश्यांकन गरिएको कुरा बाहिर भुक्ने गरेको कुकुरको आवाजबाट थाहा लाग्छ। नम्रताले दृश्यमा सेतो तीनधर्के गुलाबी रंगको स्पोर्टस् ज्याकेट लगाएकी छन्। भुँइ बिच्छ्यौनामा दुइटा सिरानी देखिन्छ। यौनको हाउभाउ हेर्दा लाग्छ, दुवै भुक्तभोगी हुन्। उनीहरूले यौनसम्पर्कको दृश्य कैद गर्नलाई दिनभरिको समय खर्चेको भिडियो हेर्दा बुझ्न सकिन्छ। पहिलो भागको दृश्यको अन्तिममा नम्रताले भनेकी छन्, 'क्यामेरा बन्द गरे हुन्न? इट्स रियल्ली डिस्टर्बिङ। मलाई उज्यालो बढी भयो।' दोस्रो भागमा नम्रताले गुलाबी टिसर्ट, नीलो जिन्सको मिनीस्कर्टस् र कालो रंगको ब्रा लाएकी छन्। किचःमानले उनको कालो धर्के पेन्टी बिस्तारै उतार्न लगाउँछन्। किचःमानले भन्छन्, 'अब म तिम्रो आँखामा पट्टी बाँधिदिन्छु, प्लेनमा उडेजस्तो, मैले त्यसको एडभान्टेज उठाएजस्तो। एडभेन्चर अफ आवर स्टोरी।' उनले भनेका छन्, '....प्लिज हनी टेकअफ योर स्कर्टर्स...।' उनले नम्रतालाई पटकâ€“पटक बेबी, हनीजस्ता शब्द प्रयोग गरेबाट पनि उनीहरूको पुरानो र सघन सम्बन्ध बुझ्न सकिन्छ। किचःमानले नम्रतालाई आँखामा पट्टी बाँधेपछि भन्छन्, 'यू आर गोइङ राइट बेब...!' दाहिने हातमा लगाएको घडीसहित सबै बस्त्र उतारिसकेपछि किचःले सोध्छन्, 'स्याल आई पुट दी क्यामेरा अन ट्राइपड?' नम्रताले जवाफ दिन्छिन्, 'यस!' यसबाट दुई कुरा प्रस्ट हुन्छ, पहिलो उक्त दृश्य बजारमा भनिएजस्तो मोबाइलबाट नभई डिजिटल क्यामेराबाट खिचिएको थियो, दोस्रो दृश्य खिच्नका लागि नम्रतासित अनुमति पनि मागिएको थियो। यो संवादपछि अर्को संवाद सुनिन्छ केटाको, 'स्याल आइ कम इन?' भिडियोमा केटा कालो टिसर्ट, कालो धर्के र खैरो कट्टुमा देखिएका छन्। दुवै दृश्यको कोठा एउटै हो। कोठामा स्लिपिङ ब्याग, प्लेट, जम्बो कोकको बोतल र खानेकुरा पनि देखिन्छ। भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला
यसबाट बुझिन्छ, त्यो कोठा कुनै होटलको होइन र कसैको बेडरुम पनि होइन। अफिस वा स्टुडियोमा बनाइएको 'कामचलाऊ' कोठाजस्तो बुझिन्छ। उनीहरूबीचको यौनसम्पर्क उत्कर्षमा पुगेपछि एकदम पीडामा परेजस्तो आवाजमा कोठाबाहिर एउटा कुकुर 'कुइँâ€“कुइँâ€“कुइँ...' गरेर कराउन थाल्छ। अर्कातिरबाट गितारको आवाज सुनिन्छ। फेरि एकैछिनमा लगातार ढोका ढकâ€“ढक (नक) गरिएको आवाज आउँछ। यसपछि दुवैले जुरुक्क उठेर लुगा लगाउन थाल्छन्। केटाले क्यामेराबाट हटेर सोध्छ, 'को हो?' बाहिरबाट आवाज आउँछ, 'दाइ, म हो!' र, दोस्रो भाग पनि टुंगिन्छ। नियत षड्यन्त्रको जतिवेला नम्रता अभिनीत चलचित्र 'मेरो एउटा साथी छ' प्रदर्शनको स्थितिमा पुग्यो, लगत्तै उनको सेक्स भिडियो पनि बजारमा आएको छ। आँकलन गरिँदै छ, फिल्म युनिटभित्रैबाट यसरी उनको भिडियो सार्वजनिक गरियो, जसले फिल्मको बजार बढ्ने र नम्रताको करिअर पनि चौपट हुने। आखिरमा सिसाको घरमा बसेर अर्काको घरमा ढुंगा हान्नु नेपालका फिल्मकर्मीबीचको पुरानै प्रचलन न हो! अर्कातिर कलाकारले जस्तो पनि दृश्य दिन पाउने र त्यसबाट सामाजिक सद्भाव, मर्यादा र नैतिकताको ख्याल गर्नु नपर्ने स्थिति विद्यमान रहेको छ। प्रश्न उठेको छ, के कलाकारका लागि कुनै आचारसंहिता लागू हुनु नपर्ने हो?
Posted by ऐत राज तुम्रोक at 12:18